Uyenaba uMkhathini ngegama lokwebuza kweNgonyama - Bayede News
Isithombe: Igunundu Agency Images/nguSiya Meyiwa
Bandla lakwethu anike ningivumele ngenanele amazwi ensizwa ezalwa KwaNomajalimane athi: “Yebuzile” iNdlondlo enophaphe ekhanda kaMenzi. Uma insizwa noma intombi ihambile beyibuza uye uzwe ithi mina ngizalwa ngusibanibani inkosi engiyakhele usiphecelengwana. Lokhu kwenza ubuholi bendabuko bube yikhanda esizweni njengoba nobaba ekhaya umele ubunhloko begceke. Kanjalo neNkosi yesizwe iyinkosana yethu sonke amafa kanye namagugu ethu abuzwa kuye. Emuveni kwesikhathi esithize ngokwempilo yasendle inyoka iyebuza bese kuthi lapho ihambe khona kubonakale ngomebuzo. Ngibone iningi liba mathinta nyawo ngalo mugqa, indideko iza nokuthatha le nkulumo ngokomqondo osobala. Kanti uBukhosi bungukuma kade kwethu noma isimakde sesizwe. Ngabe kuchazani lokhu? Njengoba zonke izidalwa eziwumsinsi wokuzimilela kuleli kuchaza ukuthi ubukhona bethu abanamukhawulo akekho ongakhomba ukhokho wethu wokuqala yingakho abathe ukuzika ngokomlando nokukamoya bethi singaboHlanga.
Noma sibheka amahubo aqanjwa ngonyaka we-1856 lapho bethi; “Khula nsika yezwe khula simakade saMakhosi”. Ukuma kade kwethu kufakazelwa wubukhona beNgonyama bese kuthi noma sekufike isikhathi sokukhothama kwayo thina sisale sibe ngumebuzo wayo. Amaseko oBukhosi ajule ngendlela engachazeki asezibilini zabo bonke aboHlanga ngoba uBukhosi buqala esigodini esiqashwe yinduna njengesandla senkosi buye esifundeni esiphathiswe inkosi. Siyini isigodi? Leyo-ke yingxenye yesifunda bese kuthi uma izigodi seziphelele zibizwe ngesifunda senkosi lezi zifunda uma seziphelele ziba yisizwe esibuswa yiNgonyama nayo iba nesandla esinguNdunankulu wesizwe bese kuthi zonke izinduna kusukela kweyezinsizwa, abadidiyeli noma abakhuzi bamabutho kuze kuyofika ezinduneni zaMakhosi. Lolu empeleni wuhlaka olulodwa oluletha uzinzo ezweni. Uma sinezinhlaka ezinjena asikwazi ukuthi iNgonyama isithele emehlweni ethu. Ngoba izenzo, injulamqondo kanye namasiko nemikhosi yesizwe ahlala emi ingunaphakade awaguquki futhi nezinhloso zawo ziwukulonda imiqulu yesizwe yedluliswe esizukulwaneni esilandelayo. Nanokuthi lowo okhonjwe ngumunwe wezidalwa ukuhlala eSihlalweni usuke enegazi laleyo Ngonyama ekhotheme manje kungani kusexwayisa uma kuthiwa yebuzile iNdlondlo?
Imikhosi emiselwe ukugcinwa minyaka yonke iyimebuzo yalabo asebaba mande mhlophe okuyibo abasishiyela la magugu ukuba sibakhumbule ngayo sicebe izinsi zethu ngayo. Ngonyaka we-1816 iLembe lihlala kulesi Sihlalo okhokho bethu baqoma umbono weSilo sakwaDukuza saze saba nesizwe esiqagulwa njengesikaPhunga benoMageba kuze kunezindawo ezaqanjwa ngesikhathi sokwakhiwa kwalo mbuso ngabe akuwona umebuzo lowo? Kithi njengoZulu iSILO siyaphila qingqo!! Mhlampe ukuba besithandabuza noma sibanjwe yinomfi besiyokhuluma okunye. Uma ubuka ukuguquka kwezikhathi lapho imfashini noma lokho okusemugangathweni kufiphala kugqitshwa zitayela ezintsha kodwa imvunulo kaZulu imi enguneni angigwexi ngiyabuza ngabe akuyona na imebuzo kaZulu leyo ezimelele ngephakade? Bengibuka nje ngelanga lokukhunjulwa koMdala amabutho edle onkaqa beyifuqa, iminjweza, imidada, oshindindi nomashiyazeqana bebhudle amatholana. Ngingeyiphathe eyezintombi zona ebezishaya ingceka zihaya amahubo nezinkondlo zidle onomndindi zihlobe ngobuhlalu basendulo yingakho silibeka ngembaba ligcwale umlomo sithi yebuzile iNgonyama futhi iphakathi kwethu. Ongakuboni lokhu akacikice izinhlakahla asuse ubhici abone ubuhle besiko lakhe.
Awu yaze yamihle imebuzo kaZulu, lapha ngibala amabutho asendulo Izinyosi, Uthulwane noma Amamboza, Ukhandampemvu, Imbokode ebomvu uPhefeni uqobo noThuli lwezichwe kuze kuyofika kuDakwakusutha. Izibongo ezakhe uBukhosi bukaZulu ziyizigi nemebuzo yoBukhosi. INkosi ayikaze ife ngoba uma kunjalo kusho ukuthi nathi sife sihamba. Ziningi izivunguvungu ezike zabhenguza uZulu ngakho makungabi yithi esiphenqula isihenqo sikaZulu esisibekele amanoni ethu okunamasikompilo esihloba ngawo kube ncane indawo. Thina singamakhosana nomafungwase bakaZulu.
Le ngqophamlando yoBukhosi mayingafiphali ngathi. Size singawanceli amathe abathakathi bese sigema sihlonga okubi ngemvelaphi yethu.ukukhothama kweNgonyama makusho ukuzalwa kabusha kwesizwe. Ziningi izifundo ezitholakala ezinhlungwini kunasebumnandini. Igqabho neqholo esilibone kuZulu eyotshala iNkosi lingefaniswe lingamaqabuqabu lapha kithi nebala yebuzile ekaMjokwane. Sibone ngemivimbi nezihlambi zemvula ukuthi kuguqe iqhawe lomlando isithunywa sezinyanda zezulu. Siyolokhu sihhahhame njalo singoma ngomanye sithi; “Hha, hha! UyiNkosi yaMakhosi! UyiNkosi yoHlanga lwesizwe sikaZulu!!”
nguMbuso Khoza Mar 26, 2021